Haweenka iyo Qosyka - VOA
Khamiis 26 May 2022
Barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska: Wareysiga Sacdiya Yaasiin Xaaji
Barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska: Wareysiga Khadiija Maxamed Diiriye
Haweenka iyo Qoyska: Muhiimadda xirfadaha gabdhaha
Dhageyso Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan xirfadaha ay gabdhaha kusoo barteen guryaha waalidkood iyo sida ay u anfacdo marka ay qurbaha yimaadaan.
Haweenka iyo Qoyska: Xaaladda adag ee ay ku soomayaan qoysas badan oo Soomaliyeed
Haweenka iyo Qoyska: Fursadaha shaqo helista gabdhaha ku nool Garoowe
Banaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku nool magaalada Garoowe.
Haweenka iyo Qoyska: Batuula Isaq Maxamed oo ku guuleysatay abaal-marin caalami ah, wareysi
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Batua Isaq Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo toddobaadkan ku guuleysatay abaalmarin la guddoonsiiyay 10-ka qof ee soogalootiga ah ee ugu saameynta badan dalka Finland.
Haweenka iyo Qoyska: Batula Isaq Maxamed
Haweenka iyo Qoyska: Wareysi aan la yeelanay Deeqa Cabdi Dhalac
Haweenka iyo Qoyska: Saameynta dagaalka Ukraine ku yeeshay qoysaska Somalida
Wareysi: Zahra Mustaf oo u tartameysa Baarlamaanka Australia
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Zahra Mustaf oo si madax banaan ugu tartameysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka Australia ee doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bartamaha sanadkan.
Haweenka iyo Qoyska: Muna Ismacill oo Wadda Gawaarida Taraagga ah
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Muna Ismaaciil Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku shaqeysata wadista Gawaarida waaweyn ee Truckyada oo daggan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Qoyska: COVID-19 iyo Walwalka ku Noqoshada Iskuulada
Barnaamijka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sare u kaca xanuunka COVID-19 faraciisa Omicron iyo walwalka ku aaddan dib u noqoshada iskuulada.